Ka mmanya na n'ezie ime ka ị ka mma na bed? - News Ọchịchị
Ka mmanya na n'ezie ime ka ị ka mma na bed?
Isiokwu a na-akpọ “Ka mmanya na n'ezie ime ka ị ka mma na bed?” e dere site Sally Adams, maka theguardian.com on Tuesday 17 November 2015 06.30 UTC
Mmanya "...-akpalite ọchịchọ, ma ọ na-ewepụ arụmọrụ "kwuru Shakespeare, ma ọ nri? Ọ bụ ọtụtụ ndị kwere na mmanya na-enyere anyị na-ejighi anyị inhibitions na nwekwara ike eme ihe dị ka ihe aphrodisiac (mgbe ụfọdụ!). Ma ọ bụghị echiche ọtụtụ mgbe dị ka a enhancer arụmọrụ na ime. M na-ezo ka ị na-"Brewers droop", afọ-ochie aha otutu n'ihi na nwa oge erectile dysfunction ekere uwa maka otutu site na-aba n'anya.
Echiche nke mmanya ókè dị ka a ahuhu na-egbu e gosipụtakwa ya site dabeere n'ahụmahụ na nkà mmụta sayensị na-egosi, ma nke a adịghị ka daa mbà media mmasị na ya dị ka a enhancer libido. Nke ọ bụla eziokwu n'azụ echiche ahụ bụ na a di na nwunye nke pints pụrụ n'ezie ime ka ị a mma n'anya ma ọ bụ onye a bụ nnọọ ihe ọzọ "sexy" sayensị akụkọ?
E nwere a ịrịba aru nke research na-atụ aro mmanya jikọtara heightened mmekọahụ nzaghachi (ụba agụụ na enwekwukwa orgasm) na echikwapụ nke mmekọahụ inhibitions. Kemgbe ụwa, mmanya na-nwere a ogologo mkpakọrịta romance na mmekọahụ na okwu nke mgbasa ozi. N'akụkụ aka nke ọzọ, mmanya e jikọtara ya na-abawanye na ize ndụ mmekọahụ agwa, nke nwere ike ịkpata butere ime ọkwa mmekọahụ ebute site ná. Nyere ndị a na-emegiderịta mmetụta, gịnị mere media isiokwu na-elekwasị anya n'ihe ndị dị mma mkpakọrịta n'etiti mmanya na mmekọahụ, na ihe na-eme na nyocha ọmụmụ n'azụ media akụkọ na-agwa anyị?
A na-adịbeghị anya akụkọ na Independent kọrọ na-ekwu mere site a akwụkwọ ọhụrụ a na-akpọ "The na di na Sex Ngwọta". Mmekọahụ ọkachamara Dr Kaiser Van Kirk-ekwere na-aṅụ biya pụrụ iduga anọ dị iche iche oganihu mmekorita nwoke ahụmahụ ụmụ nwoke: (1) egbu oge ejaculation, (2) enwekwukwa libido na ndị ọzọ ufiop erections, (3) ụba mmekọahụ ume na (4) na biya nwere ike inyere "gị n'ozuzu ike" ma si otú ahụ mee ka ị na-erughị "umengwụ na mmekọahụ". Na-akpali mmasị, nanị mgbe ọmụmaatụ a ọgbọ enyocha nnyocha n'isiokwu bụ nke atọ – na "mmanya mma mmekọahụ ume".
A nchọpụta e bipụtara na European Journal of Epidemiology akụkọ na a meta-analysis nke 13 ọmụmụ na-achọ na obi n'ihe ize ndụ na biya oriri. Nchoputa na-atụ aro a J ekara usoro, ekwu a belatara ihe ize ndụ nke ọrịa obi na ndị na-aṅụ 55g biya a ụbọchị ma ọ bụ obere. Ọ dị mkpa iburu n'obi na a amụ adịghị n'ezie tụọ mmekọahụ ume, kama belata obi n'ihe ize ndụ e weere dị ka a zighachi akwụkwọ nnọchiteanya. Ọzọkwa, ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu doo anya ihe "grams nke mmanya" pụtara n'ebe a. Ọ bụrụ na ihe ọtụtụ na-egosipụta ọcha ethanol, 55g biya bụ Ẹkot mkpokọta 7 nkeji ma ọ bụ 3 na ọkara pints nke pụtara adịghị ike biya kwa ụbọchị. Nke a yiri ka 'e mmanya na-iwesa ụbọchị ọ bụla!
Otu isiokwu dị na The Telegraph kọrọ na a 2009 ọmụmụ e mere na Western Australia si Keogh Institute for Medical Research. Omumu a na-enyocha mmetụta nke mmanya eji na nwoke erectile dysfunction. The Telegraph isiokwu na-enye a njikọ ka a ọgbọ enyocha isiokwu, ma achọtaghm a ọmụmụ on a na-ebipụta na Journal of Medicine Mmekọahụ. Ọ anakọtara ozi site na 1,580 ndikom on erectile ọrụ, mmanya, na-emepụta sịga ojiji. The Telegraph kọrọ na ndị mmadụ na-aṅụ ihe a agafeghị oke ego nke mmanya kọrọ 30% ole na ole erectile nsogbu karịa ndị na-abụghị aṅụ. The isiokwu akọwara a Inweta dị ka a "mma mkpakọrịta" n'etiti agafeghị oke aṅụ na erectile ọrụ.
Ndị dere akwụkwọ nke nnyocha akwụkwọ na-egosi na ọ dịghị nke kọrọ chiri anya n'etiti mmanya ọnọdụ na erectile ọrụ ndị "statistically ịrịba" ruo mgbe ọrịa obi na ise siga ọnọdụ e achịkwa n'ihi na nyochara. Ọ dịkwa mkpa ka anyị cheta na ọmụmụ eji onwe akụkọ jikoro nke-aṅụ oké mmanya na erectile dysfunction, nke pụtara ihe ọ bụla mkpakọrịta hụrụ na-dabere na ike na adịghị njikere nke ndị keere òkè n'ụzọ ziri ezi akọ ha mmanya were na erectile nsogbu
A third study reported in The Independent this year looked at whether alcohol can boost women’s sex drives. The study showed that following moderate alcohol consumption, levels of testosterone increased in women, but not men. This might be evidence of alcohol increasing the libido of women via a temporary surge in the male sex hormone. Despite being reported in The Independent this year, the research in question appears to come from a study published in Nature site Alko (a large Finnish alcohol retailer) na 1994.
The research itself is a one-page report on an experimental study where men and women were given either an alcoholic beverage or a non-alcoholic juice, and hormone levels were measured (although it is not clear how). When controlling for contraceptive use and menstrual cycle (which affects hormone levels) mmanya ụba testosterone jiri ya tụnyere ihe placebo na ndị inyom, but not men.
E nwere ọtụtụ nke methodological ajụjụ a na-apụghị zara site n'ihe ọmụma dị a obere akụkọ – ka ndị sonyere mara ma ọ bụrụ na ha nọ na-enweta onye aṅụrụma ma ọ bụ placebo onunu? Olee ọnọdụ e sonyere nwalere? Otú ọ dị, n'ihi na m nnukwu ajụjụ bụ ya mere na-na media akụkọ banyere ihe ọmụmụ n'elu 20 afọ ndị gara aga, nke bụ a bukwanu ego nke oge na ngwa ngwa na-akpụ akpụ ụwa nke nnyocha sayensị?
Na-akpali mmasị, ná mbipụta nke isiokwu dị na The Independent coincided na a pịa ntọhapụ maka a ọhụrụ vodka otu ụlọ ọrụ na-akpọ Alko plus. (Ọ bụ anya ma a ụlọ ọrụ na-mmekọ na Alko). Na pịa ntọhapụ, na vodka na-kpọmkwem iji na ndị inyom, with claims made regarding the capability of alcohol to increase female libido: “Hey Gals: Put New Meaning Into Your July 4th Fireworks; Alko-Plus Creates ‘Lust Vodka’ that it says Increases Female Sexual Desire”.
In terms of dose, e nwere ike ịbụ otu ezigbo ego nke mmanya ime ka ndị a enwe mmetụta dị mmekọahụ agụụ ma ọ bụ arụmọrụ. Ozugbo gara aga na fọrọ mmetụta o nwere ike na-adịghị mma. Nke a echiche na-akwado biphasic ọdịdị nke mmanya, na stimulant mmetụta dị ka ọbara na-aba n'anya ịta-abawanye, ma depressant mmetụta dị ka ọ na mbelata ọzọ.
Mmanya ndimmadu nwekwara mmetụta omume mmekọahụ n'oge mmenaanya. Nanị ikwere na mmanya na-aba n'anya na-abawanye mmekọahụ agụụ pụrụ iduga n'ezie mejụọ agụụ mmekọahụ n'oge mmenaanya. Expectancies banyere mmanya na oriri na-eme ihe a o nke research n'inyocha mmetụta nke mmanya na ihe ọ bụla omume. Ọ dị mkpa ka nnyocha na-ekpebi mmetụta nke ma ndị kpọmkwem pharmacological mmetụta na-atụ anya.
N'ikpeazụ, the way alcohol use is measured can impact on the association with sexual behaviour. The administration of alcohol in an experimental study versus self-report of alcohol use by drinkers is likely to yield different study findings. Ọzọkwa, it is very difficult to directly measure sexual behaviour. Most studies have to rely on self-report of sexual arousal and performance or use proxy measures such as cardiovascular and physiological function.
Accurate representation of research evidence on alcohol and sex may not yield a “sexy” headline. Otú ọ dị, clear and honest reporting of research findings and at least a link to the original published study should allow the reader to make up their own mind when faced with the scientific evidence.
Na nke a na-aba n'anya nwere ikike dịkwuo n'ike agha na ime anaghị dị ka ha abụ n'ụzọ kwụ ọtọ dị ka adade ke media. The njikọ dị n'etiti mmekọahụ na mmanya bụ a mgbagwoju onye na kasị mma mata isi okwu mgbe a doro anya na echiche ziri ezi picture dị, kama a "sexed-elu" akụkọ.
Dr Sally Adams bụ onye nkụzi ahụ ike akparamaagwa na Mahadum nke Bath. Ya research-enyocha ndị na cognitive na akparamàgwà-akpata mmanya na sịga ojiji. Chọta ya on Twitter @SallyScientist
25762	0 mmanya, Nkeji edemede, Blogposts, Life na style, Sally Adams, Science, Science blog netwọk, mmekọahụ, Sifting ndị na-egosi, Society
← Ise nke kasị mma n'akpa uwe-sized smartphones Next Post →